Kooxda PSG oo isku diyaarineysa Kacaan Cusub? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxda PSG oo isku diyaarineysa Kacaan Cusub?
(10-3-2018) Kooxda kubada Cagta PSG ee dalka France ayaa isku diyaarinaysa kacaan, kadib markii ay guul darro kala kulantay Real Madrid kadib kulankii Champions League, PSG ayaa isku dayeysa in ay sameyso kacaan kooxda dhexdeeda ah, keenista kooj cusub iyo isbadal dhanka ciyaartoyda ah.
Sidaa darteed, kooxda Faransiiska ayaa aaminsan inay tahay inay xoojiyaan kooxdooda haddii ay doonayaan inay horyaalka ku guuleystaan mustaqbalka dhow.
marka laga tago horyaalka, caqabada kooxdu waa in ay abuuran koox kamida kooxaha ugu xoogan yurub, ugu yaraan in ay gaadhan afar afarta ama koobka taas oo ku guuldareysatay labadii sanno ee ugu dambeeyay.
lacag cajiib ah ayaa lagu kharash gareey kooxda PSG, laakiin wali kooxda Faransiiska ayaa kabaxday tartankii maalintii salaasada taas oo ku guul dareysatay 5-2 ooy guushu ku raacday Real Madrid.
Dhibaatadu ma ahan in ay maalgeliso 420 milyan oo euros oo ah Neymar iyo Kylian Mbappe, sida kooxo kale Man City, Manchester United, Chelsea iyo Bayern Munich ayaa dhamaantood ku qarashgareeyay lacag ay ku xoojinayaan kooxahooda.
PSG waxay dooneysaa inay muujiso qiimaha ay ku leedahay Europe ka dib markii ay soo iibsadeen malaayiin ciyaartoy.